आफ्नो व्यपार व्यवसायलाई छोटो समयमानै दुईगुना फाइदा बनाउन यस्तो कार्य गर्नुहोस ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आफ्नो व्यपार व्यवसायलाई छोटो समयमानै दुईगुना फाइदा बनाउन यस्तो कार्य गर्नुहोस !
आफ्नो व्यपार व्यवसायलाई छोटो समयमानै दुईगुना फाइदा बनाउन यस्तो कार्य गर्नुहोस !
वास्तुशास्त्रअनुसार कुनै बस्तु घरमा वा व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउमा राख्दा नफाप्ने हुन्छ। यी ६ चिज तपाइको घरमा वा व्यापार गर्ने ठाउँमा छ भने तुरुन्त हटाईहाल्नुहोस्। यी चिजहरु घरमा राख्दा आर्थिक स’मस्याबाट कहिले मुक्ति पाउन सक्दैन। हरेक दिन कुनै न कुनै समस्याले घेरीरहन्छ।ति ६ चिज के-के हुन् त आउनुहोस जानीराखौ
नटराजको मुर्ति : नटराजको मुर्तिमा भगवान शिव ता’ण्डव नृत्यको रुपमा हुनु हुन्छ । जुन विनाशको सूचक मानिन्छ । त्यसैले घरमा राख्नु अ’शुभ मानिन्छ ।
ताजमहलको तस्बिर : ताजमहल सुन्दर हुनुको साथ – साथै चि’हान पनि हो । ताजमहल मृ’त्युसंग जोडिएको छ त्यसैले यस्को तस्बिर वा प्रतिक घरमा राख्नु हुदैन ।
डु’ब्न लागेको जहाज : पानीमा डु’ब्न लागेको जुन सुकै बस्तु वास्तुशास्त्रअनुसार अ’शुभ मानिन्छ । घर सजाउन राखिएको पानीजहाजको तस्बिर तपाइको घरको सोभा बढाउनुको सट्टा घ’ट्न सक्छ। आर्थिक स’मस्या आउन सक्छ त्यसैले पानीजहाजको तस्बिर वा प्रतिक घरमा राख्नुहोस्।
जंगली जनावर : घर सजाउने बहानामा हामी ह्रिं’सक जंगली जनावरको तस्बिर राख्ने गर्छौ। यस्ता जनावरको तस्बिर घरमा राख्दा मानिसको स्वभाव पनि उस्तै हुने गर्छ।
महाभारत र ग्रन्थ: महाभारत पुजनीय ग्रन्थ हो। तर यसलाई घरमा राख्नु अ’शुभ मानिन्छ। यो पारिवारिक झ’गडाको कहानी हो। यसलाई घरमा राख्दा घरमा झैँ झ’गडा बढ्ने, त’नाव बढ्ने हुन्छ।
शंखको साथमा रथ : रथ यु’द्धमा उपयोग हुने बस्तु हो भने शंख यु’द्ध शुरु हुन लाग्दा बजाईन्छ। त्यसैले यी दुइ बस्तु संगै राख्नु हुदैन। यसले घरमा अ’शान्ति पैदा गर्ने गर्छ। पिएनपिखबर